AePDS App Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Dingana lehibe iray hafa koa no noraisin'ny Governemanta Andhra Pradesh, India ho famatsiana sivily. Araho amin'ny alàlan'ny fitaovanao Android izao ny fampahalalana rehetra momba ny famatsiana sivily. AePDS App no ​​fampiharana Android farany, izay manolotra ny hanome ny fampahalalana rehetra momba ny famatsiana sivily sy ireo mpamatsy.
Araka ny fantatrao dia misy fanatsarana mahavariana taonina vita ao amin'ny firenena. Saingy misy ny fanatsarana manokana, izay nataon'ny governemanta tao Andhra Pradesh. Misy fanatsarana vitsivitsy natao teo amin'ny sehatry ny fanabeazana tato ho ato.
Noho izany, mitodika any amin’ny fanaterana biby fiompy ny tompon’andraikitra ankehitriny, izay feno fanondranana an-tsokosoko, fivarotana tsy ara-dalàna ny mainty hoditra, ny kolikoly, sy ny zava-dratsy maro hafa. Noho izany, tian’ny tompon’andraikitra ny hanome fomba mangarahara, izay tokony hanaovana ny fanaterana rehetra ary hahazoan’ny tsirairay ny filana fototra eo amin’ny fiainana.
Noho izany, novolavolaina ity rindranasa ity, amin'ny alalany no hangarahara ny fanaterana ny biby fiompy ary afaka miditra mora foana ny tsirairay. Misy fiasa sy serivisy samihafa misy ao amin'ity rindrambaiko ity, izay ahazoan'ny olona tombony. Noho izany, mijanona miaraka aminay ary hizaha izany rehetra izany.
Topimaso momba ny App AePDS
Izy io dia rindrambaiko mamokatra Android, izay manolotra ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny famatsiana sivily an'i Andhra Pradesh. Manome ny fomba mora indrindra izy io, amin'ny alalanao no ahitanao mora foana ny fampahalalana rehetra momba ny famatsiana sy ny mpivarotra. Ny fiasa sy serivisy rehetra an'ity rindranasa ity dia maimaim-poana ampiasaina amin'ny rehetra.
Izy io dia novolavolaina manokana ho an'ny teratany karana, midika izany fa tsy azon'ny firenena hafa idirana. Noho izany, raha avy any India ianao, dia afaka mampiasa mora foana ny serivisy sy ny endri-javatra misy an'ity fampiharana ity. Manome sokajy samihafa ho an'ny mpampiasa izy io, amin'ny alalanao no ahafahanao miditra amin'ny fampahalalana rehetra misy.
AePDS Apk dia manome ny fomba nomerika tsara indrindra ahafahan'ny tompon'andraikitra manara-maso ireo vokatra famatsiana fiompiana. Manome ny fampahalalana rehetra momba ny fivarotana fiompiana mpiompy mavitrika, izay ahafahan'ny olona miditra mora foana amin'ny mpamatsy akaiky azy indrindra.
Raha te hanampy na manala olona amin'ny karatra fihinana ianao, dia azonao atao ny mangataka azy io amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Raha misy mpikambana ao amin'ny karatra fihinana tsy misy na maty, dia azonao atao ny manao tatitra azy io ary hesorina amin'ilay karatra ilay mpikambana.
Misy dingana mitovy amin'izany amin'ny fampidirana mpikambana vaovao. Azonao atao ny mitantana ny fampahalalana rehetra momba ny fandefasana sy ny sakafo amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Etsy ankilany, ny tompon'andraikitra dia hanara-maso tanteraka ny famatsiana.
Noho izany, ny kolikoly amin'ny fandraisana anjara dia tsy hitranga mihitsy. Ireto ny sasany amin'ireo dingana tsara indrindra avy amin'ny governemanta, izay ahitan'ny tsirairay ny tombony. Io no fomba tsara indrindra hahitana olona ratsy amin'ny tsingerin'ny famatsiana biby fiompy.
Betsaka ny endri-javatra sy serivisy mahagaga hita ao amin'ity app ity, izay ahafahan'ny mpampiasa sy ny tompon'andraikitra manao ny fanovana tsara indrindra. Noho izany, misintona ity fampiharana ity ary mahazo ny tombontsoa rehetra avy aminy. Raha manana fanontaniana momba ity app ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Anaran'ny fonosana nic.ap.epos
Developer Ekipa AEPDS afovoany
Ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny famatsiana sivily
Tantano ny karatra anjaranao
Ampio ary esory ny mpikambana
Fomba tsara indrindra amin'ny fizarana ara-drariny
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mitsidika ianao ary mandany fotoana. Izahay dia hizara ny fomba haingana indrindra hampidinana azy aminao rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao ary manamboatra paompy tokana ao aminy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Mahazoa ny endri-javatra tsara indrindra amin'ity sehatra ity ary midira mora foana ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny famatsiana biby fiompy. Noho izany, misintona fotsiny AePDS App ho an'ny fitaovana Android ary mahazo fidirana mora amin'izany rehetra izany. Ho an'ny fampiharana mahafinaritra kokoa dia tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, famokarana Tags AePDS Apk, AePDS App, App AePDS Ho an'ny Android Post Fikarohana